【. Indongomane 1】Isibulala ntsholongwane ngokupheleleyo/isikhululo seenqwelomoya/Isikhululo saseMntla/iGuanyinqiao/indlela yokuphuma kwiMetro "Igumbi leKing yethiyetha yaBucala" - I-Airbnb
【. Indongomane 1】Isibulala ntsholongwane ngokupheleleyo/isikhululo seenqwelomoya/Isikhululo saseMntla/iGuanyinqiao/indlela yokuphuma kwiMetro "Igumbi leKing yethiyetha yaBucala"
HI, molo sithandwa, wamkelekile eChongqing...
Ukuba eli gumbi libhukishwe ngokupheleleyo, nceda ucofe kumfanekiso wam weprofayile ukukhetha elinye igumbi.
I-B&B yethu ikwiSithili saseYubei esiphuhlileyo kumbindi wedolophu.Zingaphezu kwe-19,000 iihotele eChongqing, i-60% yazo zikulo mmandla, kuba ukugcwala apha kuluncedo kakhulu. Kuthatha malunga nemizuzu elishumi ngemoto (uloliwe olula) ukufikelela kwiJiefangbei, Hongyadong, Yangtze River Cableway, Two Rivers Tour, Bayi Street, Guanyin Bridge, Ninth Street kunye nezinye izinto ezinomtsalane kwi-Intanethi. Indlu yahanjiswa ngo-2017 kwaye yagqitywa umhlobiso othambileyo ngo-2018. Igumbi li malunga neemitha ze-square ze-33, zonke zingamagumbi elanga kunye neefestile ezivulekileyo zeemitha ezi-3. Yipropati eqhelekileyo ephezulu ephumelelayo xa uphuma kwaye uthule xa ungena. Ilawulwa ngokupheleleyo yiPropati ye-Dongyuan, eyaziwa njengeLongfor, i-China Shipping kunye neVanke.
Onke amagumbi ethu aqeshwa njengendawo yokuhlala ezimeleyo, hayi indlu ekwabelwana ngayo nabanye.
Ukucoceka kwegumbi yeyona nto siyikhathalele kakhulu.Inethiwekhi yangaphakathi ye-airconditioner yendlu nganye icocwa ngokungqongqo kwaye icociwe.Amashiti kunye neeqhiya zibhakwa kubushushu obuphezulu yinkampani yokuhlamba iimpahla.Amagumbi endwendwe aye acocwa kabini ukuhlolwa.
Xa ungena endlini, ungabona ibhedi eneenkwenkwezi esikulungiselele yona.Imiqamelo emibini onokuyikhetha phakathi kwephezulu nephantsi iyakuqinisekisa ukuba ulala ngokwaneleyo. Uluhlu olupheleleyo lwezixhobo zasekhaya kunye nezinto eziyimfuneko zemihla ngemihla ziya kwenza uhambo lwakho lube lula njengekhaya.
Indlu isebenzisa i-wifi ene-wireless high-speed, ikuvumela ukuba wena kunye nosapho lwakho ningene kwi-Intanethi nangaliphi na ixesha naphi na ngexesha lohambo.
Sikwabonelela ngeekiti zokuhlambela ezilahlwayo, isepha, izomisi zeenwele, iitawuli kunye neetawuli zokuhlambela, iikama, iziliphu ezilahlwayo, isicoci sempahla, njl.njl.!
Igumbi linokupheka, kufuneka ubhukishe usuku olunye kwangaphambili ukuze sikulungiselele izixhobo zasekhitshini. Iindleko yi-30 yuan ngosuku.
4.90 · Izimvo eziyi-192
Indawo iphezulu kakhulu, kunye neJiefangbei kwisixeko esidala, iBhulorho yaseGuanyin kwisixeko esitsha, kwaye indlu ibekwe kumbindi wesixeko esidala, esisitrato sokutya ekufuneka sityelelwe kwindawo yendawo. ITancheng Hotpot, eyamkelwe yinkulumbuso amaxesha amaninzi kwaye yasekwa ngo-1937, isezantsi kwigumbi lokuhlala; abantu bendawo bafola ukuya kwindlu yakudala yakwaGan ezinzulwini zobusuku, kwaye abapheki beJiajiancheng abangcamla kakhulu bonke bakukutya. . kulawo street noodles ukuba adle: Chengliang noodles ukusuka 'Chongqing Top 50 noodles "nalo ekufutshane.
Luhambo lwemizuzu emi-5 ukuya eBauhinia Commercial Plaza, apho iStarbucks, iibhari ezahlukeneyo kunye neeresityu zihlangana khona.
Ungahamba uye kwiNinth Street kwisithuba sekota yeyure. Le yeyona ndawo intsha yokuphila ebusuku yaseChongqing. Yonwabela ukuqubha kulwandlekazi lokutya, ubuhle, kunye nobuhle...
Ukuthenga: I-Beicheng Tianjie, i-New Century Department Store, i-New World Department Store, i-Suning Appliance, i-Gome Electric, i-New Century Supermarket, i-Yonghui Supermarket.
Iibhanki: IBhanki yoLwakhiwo lwaseTshayina, iBhanki yabaThengi baseTshayina, iBhanki yoNxibelelwano, iBhanki yaseMinsheng, iBhanki ye-Everbright, njl.
Ukuvuyela ukunxibelelana neendwendwe, kwaye amasiko asekuhlaleni anokwaziswa kwiindwendwe.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$15
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Chongqing